Su'aal: Waa maxay cudurka Shimbirka / Af-qallooca?
Author Topic: Su'aal: Waa maxay cudurka Shimbirka / Af-qallooca? (Read 15128 times)
« on: July 27, 2010, 02:49:19 AM »
Waxaan rabaa inaan wax ka ogaado waxa uu yahay cudurka Soomaalidu u taaqaan shimbirka oo qofka uu ku dhaco u keena inuu kala weecdo afka iyo indhaha? Maxaa keena cudurkaas?
Re: Su'aal: Waa maxay cudurka Shimbirku?
« Reply #1 on: July 28, 2010, 11:18:25 PM »
walaalkay duraan isku su'aal baanu nahay caawa waxkaleba
umasoo gelin webka waxaan doonayey in aan dhakhtarada waydiiyo
cudurkan ama su'aashan aad jawaabteeda sugaysid waana xanuunka
loo yaqaan shimbirta kaas oo calamadihiisa ay ka mid yihiin in qofka afku qaloocdo somaliduna waxay ku sameeyaan markay qofka xanuunkaas
shimbirta ku arkaan dab ayey ku dhedhejiyaan gaar ahaan afka labadiisa
dhinac waxayna aaminsan yihiin inuu qofku dabka kaga ladnaado cudurka shimbirta,
sidaa darteed diktoorada waxaan waydiinaya waa maxay magaca caadiga ah ee caalamka looga yaqaan cudurkan afka qaloociya?
waxaan kale oo doonaya waa maxay sababta qofka marka dabka lagu dhejiyo ama afka labadiisa dhinac laga gubo uu uga reeyo xanuunka shimbirta?
« Reply #2 on: July 30, 2010, 09:09:58 PM »
Shimbirowga waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa "Bell's Palsy".
Waa xaalada si degdeg ah ku timaado oo lagu garto murqaha wejiga dhinac u badan ay naafoobaan.
Waxaa calaamadaha ka mid ah: qofka oo isha dabooli karin, afka oo qalloocdo, dareenka wejiga hal dhinac oo ka tago.
Cudurkaan wuxuu ka dhashaa hawlgab ku dhaca neerfaha dareenka siiyo wejiga oo loo yaqaanno "Facial Nerve" taasoo ka imaata caabuq ama dhaawac gaara.
Cudurkaan waa laga raysan karaa iyadoo wax daawo ah loo qaadan usbuuc ilaa 2 usbuuc gudahooda maadaama caabuqii gaaray neerfaha ay ka dageen taasina ma ahan macnaheeda dabkii lagu dhajiyay qofka buu ku bogsooday ee waqtigii caadiga uu ku laaban lahaa ee eebe ugu talagalay ayaa la gaaray, Dadka qaar wuxuu ku noqdaa mid joogto ah oo ma laabto/
La xirii takhtar sida ugu dhakhsiyaha badan markii aad isku aragtid calaamadaha shimbirowga maxaayeelay daaweyntiisa way sahlantahay markuu cusubyahay laakiin haddii uu ku daaho qofka wuu ku raagaa badanaa.
Haduu qofka ka daawoobi waayo waxuu keeni karaa in isha ay qalasho maadaama aysan daboolmeynin, afkane uu cunnada iyo cabitaanka ka soo daataan maadaama isagane uusan xirmeynin.
Badanaa somalida waxay aaminsanyihiin in afqallooca ama shibirowga uusan lahayn daawo laakiin daawada loo yaqaanno "Prednisolone" ayaa la isku waafaqay sanadkii 2007 in ay tahay daawada ugu fiican waxna ka tari karto cudurkaan shimbirowga laakiin waa haddii sidii loogu talagalay loo qaato iyo qaabkii loogu tala galay.
Fadlan ha qaadan dawadaan iyadoo dhakhtar uusan kuu qarin.
Re: Su'aal: Waa maxay cudurka Shimbirka / Af-qallooca?
« Reply #3 on: June 10, 2016, 03:02:17 PM »
Doctor hadii uu faruur yaha dhan u badan yihiin oo aad moodid Qofka Marka uu hadlayo in uu afmajeer sanyahay ishiisanu ay xirmeyso ama ay dabool meyso ma la dhihi Karaa afqalooc waaye? Oo ma jiraa dhaqtar daawen?
« Reply #4 on: June 13, 2016, 03:39:22 PM »
DRhadii uu cudurkaa ku dhaco haweney uur leh, 5 ilaa 6bil ah.
maqadan kartaa kaniiniga Prednisolone?
hadii aysan qadankarin maxaa kaloo lagula tacaali karaa?
« Reply #5 on: June 17, 2016, 11:19:18 AM »
Dr waa maxay facial nerve shaqadiisuna maxay tahay hadii uu dhib gaaro ma jiraa daawoyin natural ah oo lagu daaweyn Karo
« Reply #6 on: July 05, 2016, 11:40:29 AM »
Facial nerver shaqadiisu waa inuu wajiga uu siisaa dareen iyo dhaqdhaqaaqa murqaha, daaweyntu waxay ku xiran tahay dhaawaca gaaray heerka uu yahay iyo nooca uu yahay, way dhacdaa mararka qaar inuu iska fiicnaado uu shaqada di u bilaabo daawo la'aan.
Views: 26541 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 26876 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 22388 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 8881 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 8353 January 22, 2019, 08:47:10 PM